यी ५ चीजको सेवनले तनाव बढ्छ, कसरी ? जानीराखौँ – Etajakhabar
यी ५ चीजको सेवनले तनाव बढ्छ, कसरी ? जानीराखौँ
चिन्ता र तनावमा रहन को चाहन्छ र ? हामी सबै खुशी र तनावरहित जीवनको अपेक्षा राख्दछौँ तर केही कुरा वा चीजहरू यस्ता छन्, जसले चिन्ता एवम् तनावको वातावरण सिर्जना गर्दछ । कतिपय समयमा खानपानको कारणले पनि अनुहारमा चिन्ता र तनावले भरिदिन्छ । जान्नुहोस्, यी ५ चीज जसको कारण तपाई चिन्ता र तनावले भरिपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य हुनपर्ने हुन्छ ।
अल्कोहललाई तपाईल खुशीको साथी मान्नुहुन्छ होला तर दु:खको साथी पनि अल्कोहल नै हुनेगर्दछ होला । यसले सिधा तपाईको स्नायु प्रणालीमा असर पर्दछ र यसको गतिलाई ढिलो गराउँछ जसले तपाई कतिपय समयमा तनाव महसूस गर्न सक्नुहुन्छ ।
विशेषगरी रातो मासु वा डिब्बामा बन्द गरिएको मासु यस विषयमा ज्यादै नोक्सानदायक हुन्छ । यसमा संतृप्त बोसोको मात्रा अधिक हुन्छ जसले इन्सुलिनको स्तरमा परिवर्तन ल्याउँछ । यसको दुष्परिणामको रुपमा तनाव उत्पन्न गर्नुको साथै अन्य गम्भीर रोगहरूको सम्भावना बढ्छ ।
एक सोधका अनुसार सेतो ब्रेडमा पाइने कार्बोहाइड्रेटको अत्यधिक मात्रा महिलाहरूमा तनावको कारण बन्न सक्छ । यो थकानको कारण पनि बन्न सक्छ ।
कफीले थकानलाई छुटकारा दिई ऊर्जा दिने भएता पनि यसमा रहेको कैफीन तपाईको निन्द्रा र शान्तिलाई भंग गर्छ । जसको कारण मानसिक थकान महसूस भई तनावको सामना गर्नुपर्दछ ।
चामलको अत्यधिक सेवन गर्नु पनि तनावको लागी जिम्मेवार हुनसक्छ । यसमा रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ जसले हर्मोनल परिवर्तन गरी शरीरको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स(glycaemic index)लाई प्रभावित गर्छ र तनाव महसूस हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४ समय: ९:५७:०८